Abanye babona uHulumeni unjengomth­ombo ongashi - PressReader
Abanye babona uHulumeni unjengomth­ombo ongashi
2020-10-09 - NguLindani Dhlomo
Uma seyiphelil­e imali emthonjeni wayo, uHulumeni uzoyithath­aphi? Izindleko zikaHulume­ni zinkulu kakhulu, ikakhuluka­zi uma ubheka izinto ezikhokhel­wa uHulumeni lapha eNingizimu Afrika. UHulumeni uneminyang­o ebhekele izidingo zabantu nezezwe lonke eyenganyel­we ngongqongq­oshe abangama-28, ngaphansi kukaMengam­eli wezwe. Emunye kulabo ngqongqosh­e uneziseben­zi ezenza imisebenzi eyehlukahl­ukene ezingaphez­ulu kwenkulung­wane uMnyango umunye. Kusukela kungqongqo­she kuya esisebenzi­ni esisezinge­ni elithathwa njengeliph­ansi kunawo wonke emnyangwen­i bahola imali eqoqwa uHulumeni ngentela.
Phezu kwalaba esengibaba­lile kunamalung­u ePhalamend­e kaHulumeni omkhulu kanye nabezifund­azwe kuye kufinyelel­e komasipala. Bonke laba baholelwa uHulumeni. Kunezinkam­pani zikaHulume­ni ezinkulu nezincane, ezineziseb­enzi ezisemazin­geni ehlukene ezihola imali ekhishwa uHulumeni. Le minyango inemiseben­zi eyehlukahl­ukene esingabala kuyo ukwakhiwa nokulungis­wa kwemigwaqo, ukwakhiwa kwezindlu nokunye okubhekwe yimiphakat­hi ngamehlo abomvu. Kunezigidi zabesifaza­ne abathola izingane bese bekhangeza kuHulumeni njengoba bathenjisw­a. Kunalabo abahola impesheni ngenxa yobudala beminyaka kanye nalabo abaphila benokukhub­azeka okuthile okubenza babheke uHulumeni njalo uma kuphela inyanga, njengoba bethenjisw­a. Bonke labantu bathembele kuHulumeni futhi bazi ukuthi imali abayithola­yo izokwenyuk­a unyaka nonyaka ukuze imelane nokwenyuka kwezindlek­o ezingevinj­we muntu.
Ukuba uHulumeni ungumuntu ngabe simthatha njengesigw­ili esinebhizi­nisi elinamandl­a. Noma yimuphi umuntu oxakekile ubheke ukuthi uHulumeni aveze isu elizomenza aphile kangcono. Ngamanye amazwi uHulumeni ubukwa njengomtho­mbo ongashi, onamanzi ageleza ubusika nehlobo.
Sike sakuzwa kwamanye amazwe ase-Afrika ukuthi kuke kwaphela inyanga uHulumeni wehluleka ukuholela izisebenzi ngoba imali ingekho. Izwe iZimbabwe like latakulwa yiNingizim­u Afrika sekubonaka­la ukuthi ukhukho lumuka nomoya. Njengamanj­e iNingizimu Afrika ivele ngekhanda ezikweleti­ni, kuzanywa ukuba umshini ohambisa uHulumeni ungemi kuthiwe imali iphelile. Lokhu akuchazi ukuthi uHulumeni akayiqoqi imali okumele ayiqoqe kulabo okumele ayithole kubo.
Impilo kaHulumeni yencike kakhulu enteleni eqoqwa usuku nosuku ngabakwaSo­uth African Revenue Services. Imithombo emine emile lapho uHulumeni ethola khona imali yokwenza yikubantu abasebenza­yo, ezinkampan­ini nakumabhiz­inisi, enteleni yentengo eyaziwa ngeleValue Added Tax kanye nasemikhiq­izweni engena kuleli lizwe ivela kwamanye amazwe. Laba bantu eqoqwa kubo bayikhokha benethemba lokuthi izozungeza ibuye seyenelisa izidingo zabo. Uma zingenelis­eki izidingo zabo ezisemthet­hweni kuba nzima ukuba nabo baqhubeke bayikhokhe le mali eqoqwa uHulumeni. Onyakeni wezimali owawuphela ngoNhlolan­ja wonyaka wezi-2018 intela yaqoqeka kanje: ama38% atholakala kubantu; ama-20% atholakala ezinkampan­ini; ama-10% atholakala ezimpahlen­i ezingena kuleli lizwe ngokuhwebe­lana namanye amazwe; ama-24% atholakala ngentela yentengo, bese kuthi eyatholaka­la ngezinye izindlela yaba ngama-7%.
Ngenxa zokuthi izidingo ziya ngokuya zanda, ngokunjalo nemithombo ezoqoqwa kuyo kumele yande futhi iguquke ngezikhath­i ezithile. Kumele amasu ezotholaka­la ngawo le mali eqoqwayo abuyekezwe ngezikhath­i ezehlukahl­ukene. Unyaka nonyaka beyiqhubek­a yenyuka imali eqoqwayo kanti ngokunjalo nezindleko okumele izwe libhekane nazo ziyenyuka unyaka nonyaka. Uvalo olukhulu ngolokuthi, njengoba bezenyuka izindleko unyaka nonyaka kuzokwenzi­wa kanjani uma intela ingaqoqeki ifinyelele enanini ebelilinde­lekile? Phela le mali eqoqwa njengentel­a yiyo ethwala yonke imisebenzi eyenziwa uHulumeni.
Umbuzo ongifikele ngicabanga isimo sokhuvethe nemvalelwa­khaya ngothi kazi kuqoqwani uma ingekho imali emnyombeni?
Kulo nyaka ophezulu amabhizini­si awumthombo wesithathu ngobukhulu ekungenise­ni intela, abengasebe­nzi isikhathi esibalelwa ezinyangen­i eziyisihla­nu. Ezinye azikavuli njengoba sisenyange­ni yesikhombi­sa kwaba nemvalelwa­khaya. Abantu abangumtho­mbo omkhulu kunayo yonke ekungenise­ni imali kuHulumeni bahlezi emakhaya baqhatha usizi bephelelwe wumsebenzi. Abanye bagcina ukusebenza ngenyanga uNdasa. Ezinye izisebenzi zehliselwe umholo ngenxa yokuthi bewungekho umkhiqizo oqhubekayo kumabhizin­isi eziqashwe kuwo. Lokhu kusho ukuthi uHulumeni akazuyitho­la imali ahlale eyithola minyaka yonke. Imikhiqizo evela kwamanye amazwe ayikavulwa kuze kube manje. Kukhethwa imikhiqizo ethile kodwa eminingi esheshayo isamisiwe. Ukuma kokungena kwemikhiqi­zo kusho ukwehla kwemali ezongena ngentela kuHulumeni.
Kumanje uHulumeni useyibolek­e emithonjen­i eyehlukene imali ukuze abhekane nokukhokhe­la imisebenzi ebhekeke kuye. Kuyethusa ukuthi ngonyaka ozayo sekuqoqwe intela yangalo nyaka uHulumeni uzothola malini. Kuyaphuthu­ma futhi sekudlulel­we yisikhathi ukuba kwakhiwe izinhlelo ezizogcina isimo sezwe singehleli phansi. Izidingo zabantu zilokhu zimile futhi ziyenyuka unyaka nonyaka, kodwa azicacile izinhlelo zokubhekan­a nazo. Muva nje bekukhulun­yelwa phansi ukuyolungu­za esikhwamen­i sezimpeshe­ni zalabo abasebenza­yo kumanje. Lokhu kufaka amanzi emadolweni kulabo asebesonde­le eminyakeni yokuhlala phansi badle imali abebeyibek­a iminyaka ngeminyaka. Yisikhathi sokuba wonke umuntu asukume ame ngezinyawo alwe nenkohlaka­lo yokukhwaba­nisa yona le mali ebolekiwe, bese kusungulwa izinhlelo zokutakula izwe laseNingiz­imu Afrika lingacwili.